Sawirro: Sida loo rabo dhismaha cusub ee baarlamanka Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Sawirro: Sida loo rabo dhismaha cusub ee baarlamanka Soomaaliya
6th October 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Guddiga Joogtada ah ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa axaddii shalay magaalada Muqdisho uga dooday naqshada dhismaha cusub ee baarlamaanka iyo dhismayaasha xarumaha Baarlamaanka uu ku yeelan doono gobollada dalka.
Kulankan oo ka dhacay xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho waxaa shir gudoominayey Gudoomiye ku xigeenka Labaad ee Baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawad waxaana kasoo qeybgalay inta badan Gudoomiyeyaasha guddiyada Joogtada ah ee Baarlamaanka, furitaankii shirkana ku simaha Madaxweynaha dalka ahna Gudoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari uu soo bandhigay naqshada dhismaha cusub ee baarlamaanka.
Dhismahan oo ay hirgelin doonto Dowladda Imaaraadka Carabta waxaa laga dhisi doono xarunta dhismihii hore ee Baarlamaanka oo loo yaqaan Ex Parliament kuna dhow taalada Daljirka Daahsoon ee magaalada Muqdisho.
Dhismahan la qorsheynayo oo la mid ah dhismayaasha Baarlamaannada caalamka muuqaal ahaan ayaa la qorsheynayaa in Dowladda Imaaraadku si rasmi ah u bilaabi doonto, inkastoo aan waqtiga la shaacin.
Dhismaha xarunta Baarlamaanka waxaa wehliya dhismayaasha xarumaha Golaha Shacabka Federaalka Soomaaliya uu ku yeelan doono gobollada dalka ayadoo gobol walbana sida qorshuhu yahay uu Baarlamaanka ku yeelan doono dhismaha guriga Baarlamaanka waxaana dhismahaasi uu ka kooban yahay laba qeybood oo kala ah deegaanka Xildhibaanka iyo hoolka uu Xildhibaanku shacabka uu metello kula kulmayo marka uu ku laabto deegaan cod bixiyeyaasha doorashooyinka uu metelo.
Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa dardar cusub lasoo baxday marka la eego arrimaha dib u dhiska dalka Soomaaliya, iyadoo dalka Turkigu weli ku jira kaalinta 1-aad dalalka dib u dhiska ka bilaabay Soomaaliya.
Somali Football federation announces the opening times for its leagues.
Afey: Eragya looma dhamo waa isbaaro loo dhigtay qaranimada Soomaaliya